CUDUR nafsi ah oo qofka la hara oo ay dad badani qabaan & dawadiisa (Qaybtii 3-aad) | Hadalsame Media
CUDUR nafsi ah oo qofka la hara oo ay dad badani qabaan & dawadiisa (Qaybtii 3-aad)
(Hadalsame) 31 Luulyo 2019 – Waxaad ogaataa waxa aad u baahantahay waa labo arrimood: wax la rabo inaad aaminto, iyo wax la rabo inaad ku tababarato. Halkan ka akhri qaybihii hore.
Tus, qaabka wax soo jeedinta oo kale waxay u baahantahay tababar, waxyaabaha kale waxaa kaa didin kara waa arimo dhowr ah oo aan kuu sheegi doono inaad aaminto, ka dibna aad dhaqan galiso, natiijaduna waxay noqon doontaa, inaad soo baxdo ruux isku kalsoon oo dhiirran oo aan cabsanin, khajilin, noloshana ku raaxaysta.
WAA KAN XALKU
1 – Iska ilaali tilmaamahan:
Ha isku khasbin inaad meel walba xiddigeeda noqoto, iyo inaad dhamaystirnaato, hana isku canaananin wixii awooddaada ka baxsan, ama khalad kaa dhacay, balse isku day uun inaad saxdo, aaminna inaad banii’aadam tahay, sidoo kale iska ilaali inaad si fudud isugu dhiibto niyad jabka.
Sidoo kale, inaad malayso guusha dadka kale inay guuldarro kuu tahay, quruxdoodana foolxumo kuu tahay, laab lakaca dhow iyo feejignaanta saa’idka ah, iyo inaad meel walba wax ka soo saarto, uguna fiirsato hadallada dadka si xad ka bax ah, dhammaan kuwaasina waxay ka qayb qaataan inaad is dareensiiso liidasho iyo hooseeyn, waxaana khasab ah inaad ka dheeraato.
2 – Naftaada naf kale ha barbar dhigin mar walba, balse adiga shalay iyo maanta is barbar dhig, taasaad ka ogaan kartaa inaad horumarayso iyo in kale, haddii aadan saa samayn waxaa kaa lumaysa qanaacada, markaasaad mar walba is liidaysaa, inleen adduunkan qofba qof baa ka sarreeya, goor walbana cid kaa qurxoon iyo mid kaa maal badanba waad arki.
3 – Ha is lahaysiinin tagtadaada iyo timaatadaada, maanta haddaad aqoon yartahay berri waad ka aqoon badantahay, Nabi Muxammad SCW yaraantiisii agoon buu ahaa, baahan, oo aan aqoon lahayn.
Weynaantiisana wuxuu noqday mudanaha uunka oo dhan, mustaqbalkaaga waxa uu ilaahay kuu qoray baa ka weyn waxa saaxiibkaa/taa ay maanta haystaan, isagu/iyadu hadday lacag leeyihiin adigana aqoon baad leedahay, wax aad haysato oo iyaga aysan haysan baa jira, intaas aamin.
4 – Haddii aad is moodsiisay inaad foolxuntahay, markaad aragtay inaad madowdahay, gaabantahay, ha moodin inay wax kaa dhiman yihiin, jooji ka fekerka walxahaas, maxaa yeelay; marnaba ka xumaansho waxba kagama beddeli kartid, waxna kuu tari mayso, haddaba waqtiga aad intaa ku luminayso ku bixi in aad wax kale dadka kaga sarrayso, abuurkaaga khalad kuma lihid, inaad qof ahaan u horumari weydo ayaa se khalad ah.
5 – Ogow inaysan jirin cid adiga kugu mashquulsan, oo adiga kuu camal la’, waxan aad sawiratayna waa khiyaalkaaga ee dhab ma ahan, dadku waa adigoo kale ma cid aad iskaga mashquusho baa jirta? Maya, ugu badnaan sikimo yaryar baad maskaxda ku haysaa, ka dibna waad ilowdaa, dadku waa saas oo kale, waddadaada nabad iyo xorriyad ku mar, buufiskana iska jooji.
6 – Dookhaaga ciyaar, muhiimku waa in adiga iyo rabbigaa aad raali ka tihiin waxaad samaynayso, cunayso, qorayso, duubayso, xidhanayso, dadkan wax kaa galay baan jirin, ilaahay u noolow, isagana u dhimo, buur adag noqo, dabeelaha iyo hadalka gurracan inay ku ruxaan u diid, allaa weyn, ninkii aaminaa awood leh. cabsida jooji, qofka cabsada adduunkan waxba kuma laha. Ku dhaqaaji waxa aad rabto, hal mar baad ifka joogtaaye.
Ugu dambeyn, mar walba oo ay maskaxdu kula soo qaado wax laciif ah iska xir, oo ha sii qodqodin, sidoo kale isku day mar walba inaad akhrisato cilmu-nafsiga ku saabsan xaalada ku haysata, hana ka cabsan inaad dawo u raadiso xanuun walba oo ku haya.
Waxaa Diyaariyay: Cabdiraxmaan Axmed (Abuu Xaniifa)
Previous article”Waa ka noolaan karaa!” – Qiso ka dhacday Arjantiin & waxa aad ka baran karto!
Next articleDHEGEYSO: Wiil Swedish ah oo ay ku dhacday arrin badanaa qabsata Soomaalida Sweden!
(Istanbul) 25 Feb 2020 - Sharikadda Turkish Airlines (THY) ayaa maanta si rasmi ah u joojisey dhamaanba duullimaadyadii ay ku tegi jirtey dalka Iiraan...